Shiinaha kartoo Dog daboolan kursiga gaariga saarayaasha, shirkado, warshad - xigasho - Dongguan Zhihao Boorsada Warshadaha Co., Ltd.
Guri > > Bacda xayawaanka > Daboolida Eyga daboolka gaariga
Ku Wanaagsan Eeyaha: Baakadaha gaashaaman ee gaariga waxaan siineynaa eeygaaga oo qurxintaada gudaha ka ilaali xoqida eyga, dhogorta iyo kaadida.
1. Daboolida Eyga daboolka gaariga product introduction:
¢ ¢ ¢ ¢ for ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢¢ ¢ Do ¢ ¢ ¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ Do ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢ ¢ Do ¢¢ ¢ ¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢¢ ¢ Eeyyaasha: Gawaarida gaashaaman ee kursiga gaariga waxay siinayaan eeygaaga waxayna qurxinta gurigaaga ka dhigayaan xoqista eyga, dhogorta iyo kaadida.
â € ¢ Waxay ku habboontahay suunka dhexe: Velcro furitaanka dhinaca iyo suunka dhexe, 2 siibada loogu xiro suunka, daboolka kursiga eeyga waa kursi gadaal ah oo loogu talagalay 3 rakaab ah. si fudud ayaa loo heli karaa suunka kursiga dhexe iyadoo aan loo laaban. Amniga qoyska oo dhami waa muhiim.
â € ¢ Siigo la'aan iyo biyo la'aan: Daboolida kursiga xayawaanku waxay leeyihiin dusha sare oo aan taraarax ahayn si looga hortago eeyaha inay siibtaan markay istagaan. walxaha biyuhu galaan, waara oo raaxo leh.
â € ¢ Way fududahay in la rakibo oo la nadiifiyo: Qalabka sii deynta degdega ah waa fududahay in la rakibo. Ku dheji suumanka suumanka kuraasta haysa iyo hareeraha gawaarida iyo baabuurta xamuulka ah.
â ment Commit Ballanqaadka Adeegga Macaamiisha: Haddii aadan ku helin alaabteena xaalad wanaagsan, waxaad dalban kartaa bedel bilaash ah.Haddii aadan ku qanacsaneyn badeecadeenna, waxaan sidoo kale jeclaan lahayn inaan kuu soo celinno lacagtii aad soo iibsatay.
3. Ma loo baahan yahay in la daboolo kursiga gaariga?
Haddii ay tahay kursi maqaar ama kursi aan maqaar ahayn, waxaa ugufiican in la yeesho barkin, laakiin waxaa fiican in la doorto, isku duubnaanta saamaynta gaariga oo dhan waa mid aad u qurux badan, laakiin sidoo kale aad wax ku ool ah: marka hore, xagaaga dameerka kulul , Dameer lidka-barafka; Kulaylinta kuraasta iyo hawo-qaadashada, saamayntu sidaa uma deg degayso; Tan labaad, ka-hortagga duugista kursiga iyo ilaalinta dusha sare ee kursiga; Saddexaad, isbeddel habboon oo ku saabsan maydhashada. , Hawada gaariga dhexdeeda waxay leedahay saameyn isdaahirin, ama waxay ku habboon tahay caafimaadka, laakiin ma iibsan karto alaabada fikradda ah, qalabka barkinku waa inuu noqdaa maado dhab ah, waa karaa.
Calaamadaha kulul: Kireysiga kursiga gaariga eeyga, Shiinaha, soosaarayaasha, alaab-qeybiyeyaasha, warshad, habeysan, qiimaha, oraahda, keydka